Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Oo Booqday Masaajidkii Dadka Muslimiinta Lagu Xasuuqay Ee New Zealand.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Oo Booqday Masaajidkii Dadka Muslimiinta Lagu Xasuuqay Ee New Zealand.(Sawiro)
Tue 14 May 2019.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa muujiyay taageerada iyo khushuuca uu u hayo bulshada muslimiinta ee ku nool dalka New Zealand ka dib markii uu booqday 2-masaajid oo bishii Maarso ee sanadkan lagu dilay 51-ruux oo muslimiin ah.
Guterres ayaa Masaajidyada Al-nuur iyo Linwood kula kulmay dadkii ka badbaaday xasuuqii ka dhacay labadaas masjid iyagoo halkaasi joogay muddo ku dhow saacad,.
Hadal uu sii daayey intii uu ku guda jiray booqashadiisa oo dhacday saaka ayuu ku baaqay in dadaal lagu bixiyo sidii loo baabi’in lahaa hadalada naceybka ah ee u sii fidaya sida dab qabsaday howdka, kaasoo lagu baahiyo baraha bulshada.
Abdul Aziz oo ka mid ah dadkii ka badbaaday xasuuqii ka dhacay 2-ba daasi masjid, isla markaana isku dayey inuu ka hortago ninkii geystay falalkaasi,oo isna ka hadlay kulankii booqashadaasi ayaa ammaanay dadaalka Xoghayaha Guud, wuxuuna inta raaciyay inay sharaf u tahay in bulshada muslimka ah lala qeybsado xanuunka.
Xasuuqii ka dhacay Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waa kii ugu xumaa ee loo geysto dad muslimiin ah, kaasoo uu fuliyay nin lagu magacaabo Brenton Tarrant oo 28-sano jir ah oo dhashay dalka Australian kaasoo hadda xabsiga ku jira.